Archive du 11-janv-2022
Famokarana herinaratra Jona 2022 vao tena hilamina Andekaleka
Nambara omaly fa hisy ny milina faha-4 manana tanjaka 34MW hapetraka ao Andekaleka amin’ny volana ho avy io mba hampiakarana ny famokarana mamatsy an’Antananarivo.
Sambany teo amin'ny tantara no tsy afaka misitraka ny fiadiana izay ho tompondakan'i Afrika eo amin'ny taranja baolina kitra na ny "CAN" izany isika eto Madagasikara.
Antananarivo sy ny manodidina Vao miha niha mafy ny delestazy
Hitombo hatramin'ny 128MW ny herinaratra ho vokarina ao Andekaleka raha nanodidina ny 90 MW izany teo aloha. Hiampy iray ireo milina mpanodina herinaratra ka ho lasa 4.
Raharaha Madagascar Espace Ramatoa manodidina ny 50 taona no nanao kaonty fako
Kaonty Fako na “Compte Fake” mitondra ny anarana hoe “ Wella Romene” no nanaparitaka vaovao tsy marina mahakasika ny trano fandraisan-danonana,
Ray nahavanon-doza Notsindroniny antsy ny tendan-janany..
Zava-doza ity trangam-piarahamonina tao Antsirabe ity! Lehilahy iray no nahavita namono amin'ny fomba feno habibiana ny zanany naterany ary mbola nanary azy any anaty renirano avy eo.
Fiakaran’ny vidim-piainana ankehitriny “Na fisondrotan-karama 50% aza tsy ampy”
Na fisondrotan-karama 50% aza tsy ampy hiatrehana ny fiakaran’ny vidim-piainana ankehitriny, hoy ny avy eo anivon’ny Firaisamben’ny sendika malagasy revolisionera na FISEMARE.
Alarobia Mpitsabo iray maty voatsatok’antsy
Maty notsatohan'ny olon-dratsy tamin'ny antsy tao amin'ny toeram-pidiovana na "douche" i Dr Ramasimbohitra Lalaharivony, mpiasa am-perin'asa teo anivon'ny Service de la Nutrition Tsaralalana,
Farihin’i Tatamarina ao Betafo “Tokony hampiditra 400 000 000 Ar ny fihariana trondro”
Tsy latsaky ny 400 000 000 Ar ny vola tokony hiditra avy amin'ny seha-pihariana jono raha voatrandraka araka ny tokony ho izy ny farihy Tatamarina,
Ankorangana - Antsiranana II Zazavavy iray namoy ny ainy vokatry ny fihinanana fano
Zazavavy iray no namoy ny ainy, zaza telo sy olon-dehibe roa naiditra hopitaly. Io vokatr’ilay fihinanana fano na “tortue de mer” tany amin’ny Fokontany Irodo ,
Olana ao Andekaleka Sao dia mba tetika efa tsara omana ?
Tsy finiavana hanakiana befahatany, fa kosa misy zavatra tsy mazava sy tsy milamina mikasika ny raharaha Toby famokarana herinaratra ao Andekaleka.
Dr Marius Ramaroson “Miha malefaka izao ny “variant” fa loza ny fiparitahany”
Filaharana proteinina na hoe “séquence de protéine” amin’ny tsimokaretina no antony hanomezana ny anaran’ireo karazana aretina vokatry ny Coronavirus amin’izao na Variant Covid 19,
Andry Rajoelina "Efa nisy nanatona ahy mba hanapoaka an'Andekaleka"
Nialohavana fipoahana ny fahamaizana. Raha ny firehetana vao fipoahana dia mety nisy maty ireo namono afo. Mirona amin'ny fiheverana fa fandorana niniana natao ny raharaha, ka tsy maintsy atao ny fanadihadiana.